Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwiDummies Cheat Sheet
iziphumo ebezingalindelekanga zepravastatin
Ukuba ufuna ukusebenzisa ukuvumisa ngeenkwenkwezi ukuze uziqonde wena kunye nabanye, kufuneka wazi iziseko zeenkwenkwezi nokuba zimele ntoni: imiqondiso eli-12 yeenkwenkwezi; Ilanga, iNyanga, nezijikelezi-langa; kunye nezindlu ezili-12 zehoroscope.
Iimpawu zeZodiac: Iimpawu, imihla, imikhwa kunye nabalawuli beplanethi
Uthini umqondiso wakho? Uphawu lwe-zodiac yinxalenye ye-zodiac ehlala iLanga ngalo mzuzu wokuzalwa kwakho. Kuba iLanga lihlala kuphawu ngalunye lwe-zodiac kangangenyanga, ezo mpawu ziyaziwa njenge Iimpawu zelanga . Itheyibhile elandelayo ibonisa iimpawu ezili-12 zelanga - kunye neempawu zazo zeenkwenkwezi, imihla yazo, iimpawu ezibalulekileyo ezinxulumene nazo, kunye nabalawuli babo beplanethi
I-Astrology: Iimpawu zePlanethi kunye neempembelelo
I-Astrology ibamba ukuba iLanga, iNyanga, kunye neeplanethi zimele iinkalo ezahlukeneyo zokuba ungubani kwaye zibonisa amandla abo ngeempawu abakuzo kwitshathi yakho yokuzalwa. Le theyibhile ibonisa uphawu lweenkwenkwezi kulowo nalowo mzimba wesibhakabhaka (kunye neNode yeNyanga kunye ne-asteroid Chiron) kunye nokumeleyo.
Izindlu zeenkwenkwezi kunye noko bathethayo
Njengokuba ibhendi yesibhakabhaka apho iLanga, iNyanga, kunye neeplanethi zifunyanwa zahlulwe zaziimpawu ezili-12, itshathi yeenkwenkwezi yahlulahlulwe yazizindlu ezili-12. Indlu nganye yeenkwenkwezi inefuthe kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bakho, njengoko kubonisiwe kule theyibhile:
Indlu yokuqala Inkangeleko, ubuntu bangaphandle
Indlu yesibini Imali, izinto, amaxabiso
Indlu yesithathu Unxibelelwano, okusingqongileyo kwangoko, abazalwana noodade
Indlu yesine Ikhaya, abazali, iingcambu, iimeko zokuphela kobomi
Indlu yesihlanu Ezothando, abantwana, ubuchule bokuyila, nokonwaba
Indlu yesithandathu Umsebenzi, impilo, inkonzo
Indlu yesixhenxe Umtshato kunye nobunye ubudlelwane
Indlu yesibhozo Ukwabelana ngesondo, ukufa, ukuvuselela, abanye abantu imali
Indlu yethoba Imfundo ePhakamileyo, uhambo, inkolo, ifilosofi, upapasho,
Indlu yeshumi Umsebenzi, iwonga, igama
Indlu yeshumi elinanye Abahlobo, amaqela, iinjongo, iminqweno
Indlu yeshumi elinesibini Ukuzifihla, iimfihlo, ubumoya, ukuzenzakalisa,
amayeza e-spasms yesinyi
ukuchukumisa njani ipeyinti
utywala kunye nezihlaziyi zemisipha
Uthetha ntoni ustedes ngeSpanish
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-cetirizine hci
Uyisebenzisa njani indawo enehotspot kwi-android
ukujonga njani izinga lokuphefumla